यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २२ निर्णयहरु
काठमाडाैं, १२ वैशाख । सरकारले यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २२ निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री बास्कोटाका अनुसार सरकारले कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
उनका अनुसार राजदूत फिर्ता बोलाउने अधिकार सरकारलाई भएकाले सोही अनुसारको निर्णय गरिएको हो ।
यी हुन् मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयहरू-
३. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिको बजेट तर्जुमाका लागि सात वटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन स्वीकृती दिइएको छ ।
१०. २०७६ कार्तिक १९–२१ मा स्केलिङ यूपी न्युट्रिसियन ग्लाेबल ग्यादरिङ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।